È Nwere Okpukpe nke Bụ́ Ezigbo Ya n’Okwu Gbasara Agha?
Alberto bụ onye agha n’obodo ya ruo ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri. O chetara ihe mere n’oge ahụ. Ọ sịrị: “Ụkọchukwu anyị na-agọzi anyị, sị, ‘Chineke nọnyeere unu.’ Ma m nọ na-eche n’obi m, sị, ‘M na-aga igbu mmadụ, ma Baịbụl sịrị, “Egbula ọchụ.”’”
Ray bụ onye agha mmiri n’oge a na-alụ Agha Ụwa nke Abụọ. O nwere mgbe ọ jụrụ ụkọchukwu ha, sị: “Ị batara n’ụgbọ mmiri a kpeere anyị ekpere ka anyị merie ndị iro anyị n’agha. Ọ́ bụghị otu ihe a ka ndị nke ọzọ na-ekpekwa n’ekpere?” Ụkọchukwu ahụ gwara ya na otú Onyenwe anyị si arụ ọrụ ya dị omimi.
Ọ bụrụ na i chere na ihe a ụkọchukwu ahụ zara adịghị mma, mara na ọ bụghị naanị gị chere otú ahụ.
Jizọs kwuru na otu n’ime iwu kachanụ Chineke nyere bụ, “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” (Mak 12:31) Jizọs ò kwuru na ihe ga-eme ka anyị hụ onye agbata obi anyị n’anya bụ onye obodo ọ bụ? Mba. Ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.” (Jọn 13:34, 35) Ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-ahụ ibe ha n’anya nke ukwuu nke na ndị mmadụ ga-eji ya mara na ha bụ ndị na-eso ụzọ ya. Ha anaghị egbu mmadụ ibe ha. Kama ime otú ahụ, ha na-anwụchitere ibe ha ọnwụ.
Ndị mbụ soro ụzọ Jizọs hụrụ ibe ha n’anya otú ahụ Jizọs kwuru. Otu akwụkwọ aha ya bụ The Encyclopedia of Religion sịrị: “Ndị nna chọọchị n’oge ochie, ma Tetọlian ma Orijen, kwuru na Ndị Kraịst anaghị egbu mmadụ ibe ha, nakwa na ọ bụ ya mere Ndị Kraịst esoghị ná ndị agha Rom.”
Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na Ndịàmà Jehova bi n’ebe niile n’ụwa. Ma, ọ bụrụ na obodo ha na obodo ọzọ esewe okwu, ha anaghị ekwe ka nke ahụ mee ka ha ghara ịhụ ụmụnna ha ndị nọ n’obodo nke ọzọ n’anya.
Ndị ụkọchukwu hà na-akụziri ndị chọọchị ha ka ha na-ahụ ibe ha n’anya otú ahụ Jizọs kwuru?
Dị ka ihe atụ, Ndịàmà Jehova esoghị lụọ agha ndị Hutu na ndị Tutsi lụrụ na Rụwanda n’afọ 1994. Ndịàmà Jehova bụ́ ndị Hutu zoro ndị nke Tutsi. Otú ahụkwa ka ndị nke Tutsi meere ndị Hutu. Nke a kpataara ụfọdụ Ndịàmà Jehova nsogbu. Mgbe ndị na-alụrụ ndị Hutu agha jidere Ndịàmà Jehova abụọ bụ́ ndị Hutu maka na ha zoro ụmụnna ha bụ́ ndị Tutsi, ndị agha ahụ gwara ha, sị: “Anyị ga-egburịrị unu ebe ọ bụ na unu nyeere ndị Tutsi aka ka ha gbapụ.” Ha gbuziri Ndịàmà Jehova abụọ ahụ.—Jọn 15:13.
Gịnị ka i chere? Ihe ahụ Ndịàmà Jehova mere ọ́ dabaghị n’ihe Jizọs kwuru, nke bụ́ na ndị na-eso ụzọ ya ga-ahụ ibe ha n’anya n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu ha?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndị Chọọchị Unu Hà Na-aga Agha?